Network စာမေးပွဲအကြောင်း သိချင်ပါတယ် — MYSTERY ZILLION
Network စာမေးပွဲအကြောင်း သိချင်ပါတယ်
June 2009 edited October 2009 in Networking
Network နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ စာမေးပွဲတွေကိုတော့ ကြားနေရပါတယ် MCSE,MCSA ဆိုပြီးကြားနေရတယ် ဘယ်နှခုရှီပြီး ဘယ်လိုဖြေရမယ်ဆိုတာ မသိသေးလို့ပါ ၊ အဲဒိ့network စာမေးပွဲနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေနဲ့ ဘယ်လို စာမေးပွဲတွေရှိတယ်ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်....
Microsoft စာမေးပွဲ နဲ့ ပါတ်သတ်ရင်တော့ MCITP အထိရှိမယ်ထင်ပါတယ်. အသေးစိတ်ကိုတော့ ပြောမပြတတ်ပါ..
Microsoft ရဲ့ ICT_Curriculum_Roadmap ကိုတော့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ပြန်တင်ပေးထားပါတယ်..
Ifile က အဆင်မပြေရင် 4Shared မှာ ယူလိုက်ပါ..
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဖောင်ဒါကြီး (saturngod) လည်း ဖြေမယ်ကြားတယ်.. (အချွန်နဲ့မတာ.. :P )
အခုလိုပြောကြားပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်တော်က Network စာမေးပွဲနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဘယ်လို စပြီးလေ့ကျင့်ရမယ် ဘာတွေကိုလေ့လာရမယ် အဲဒိ့စာမေးပွဲဖြေဖို့က ဘယ်လောက်ကျသလညး်က အစပေါ့ဗျာ သိချင်လို့ပါ ၊ ကျွန်တော်သိချင်တာက များတော့ MZ က ညီအစ်ကိုတွေ ဖြေရမှာ ပင်ပန်းမှာလညး်စိုးပါတယ် MZ က အစ်ကိုတွေ သိတဲ့အထဲက တစ်ယောက်ကို တစ်ခုလောက်စီ ဖြေပေးကြရင် ကျွန်တော်လညး်အဆင်ပြေမှာပါ ဖြေပေးတဲ့သူလညး် ဒီလောက်ပင်ပန်းသွားမယ် မထင်ပါဘူး
ကိုစေတန်ကြီးလညး် ဖြေမယ်ဆိုတော့ သူ့ကိုအဓိကအားကိုးရတော့မှာပေါ့နော်:5: ကိုစေတန်ကြိးရေ အစ်ကိုဖြေမယ်ဆို ဘာတွေကိုလေ့လာလညး် ဘယ်လိုဖြေမှာလညး် ဘယ်တော့ဖြေမှာလည်းဆိုတာကို ကျွန်တော်သိချင်နေပါတယ် :5: :77: :77:
သူက Web ကိုဖြေမှာပါ.. C# လုပ်နေတယ်ကြားပါတယ်..
အသေးစိတ်သိချင်ရင်ကတော့. မြန်မာ အိုင်စီတီပါတ်ထဲက Myanmar Inspriation ကိုသွားရောက်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်..
သူက အသေးစိတ် Trend တွေနဲ့ Track တွေကို ပြောပြနိုင်လိမ့်မယ်..
သူက web ကိုဖြေမှာပါ.. C# လုပ်နေတယ်ကြားပါတယ်.. :d
( အီး..... အိုင်စီတီ ပါတ်ထဲကို မသွားနိုင်လိုု့ပေါ့ ကိုကိုတို့ရယ်၊ ကျွန်တော့်မှာ အချိန်ကလညး် သိပ်မရတော့ mz က ကိုကိုတို့ နည်းပေးတဲ့အတိုင်း လုပ်ဆောင်ချင်လို့ မေးတာပါဗျာ
Network exam တွေကတော့ အရင်ဆုံးဆိုရင် MCSA ကို အရင်ဖြေရမယ်။ ပြီးမှ..MCSE ကို ဖြေရမှာ။ MCSA အတွက်... ဖြေရမယ့် subject က. 620(vista exam), 290(server03),291(sever03).. ပြီးရင်...ကိုယ် လိုက်မယ့်.line.ကို ်မူတည်ပြီး..ယူရမှာ.. ကိုယ်က Messaging line( Exchange) ကို ဖြေချင်ရင်..284(exchange subject) ကို ဖြေရမှာဖြစ်တယ်။ if ကိုယ်က secrutiy ကို ယူရင်တော့..(ps.i don't know exactly about this subject cos i've taken exchange) သင်တန်းတွေလဲရှိတယ်။ ကျွန်တော်ဆိုရင်..41street က.. MSC Class မှာတက်ခဲ့တယ်။ if u want to test parctical.. plz go to this website (www.examcollection.com) u must first download VCEsoftware that also included in this site. Then u can train yourself. ကျွန်တော်သိသမျုကတော့ ဒီလောက်ပဲ။ About MCSE, U will know after u learn about MCSA. by the way... there are at least3subjects to finish MCSE after u get MSCA. BUT it's rarely to get MCSE. Because most of people usually take CCNA or something after finish MCSA. ok? :67::67::) About Fees, may be 50000kyat and exam fees.. may be about 70000kyat.